Cabdikhayr Sheikh Soofe
Shaqsiyaadkii Soomaaliyeed ee masuulka ka ahaa burburkii qaranamidii Soomaaliyeed iyo xadgudubyadii xaquuqul insaanka ka dhanka ahaa ee ka dhacay Soomaaliya, markii lagula loollamay hab-dhaqankooda dugaagnimada ahi waxay casuumeen cadawgii taarikhiga ahaa ee ummadda Soomaliyeed ee marwalba u haliilayey qabsashada waddanka Soomaaliya. Waa qayb kamid ah ammuuraha uu ka hadlayo gabayga soo socda ee la magac baxay Cabbir ee soo baxay Maarso 11, 2007. Gabayga waxaa tiriyey Cabdikhayr Sheikh Xassan Sh. Soofe waxaa lagu soo bandhigay Shirkii bulshada Soomaaliyeed ee waqooyiga America ee lagu qabtay Columbus, Ohio Maarso 10-11, 2007.
Shirkaasoo ay soo abaabuleen aqoonhanno Soomaaliyeed waxaa uu ku saabsanaa sidii midnimo Soomaaliyeed loo heli lahaa iyadoo loo marayo wada xaajood iyo dedaal aan rabshado wadan. Soofe wuxuu ku halqabsanayaa Eng. Maxamed Cali Cibaar oo ah aqoonyahan iyo abwaan Soomaaliyeed oo deggan waddanka Holland marwalbana ka hadlo wado jir, madaxbannaani, nabad iyo midnimo Soomaaliyeed, si gaar ahna saaxiib u yihiin Soofe. Faahfaahin dheeraad ah gabayga isaga ayaa iska bixinaya.
Ciil looma go� Maxamedow ceeb adduunyada�e
Culimaa�uddiinkiyo kuwii caaqillada iibshay